Gemstone ojoro. Kedu ka a ga-esi gbapụ site n'ịzụta nkume?
Gemstone na ndị na-ere ọla na-eji ọtụtụ teknụzụ eme ka ị kwenye ịzụta. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị dara ogbenye ma ọ bụ nde mmadụ. Ha maara otu esi achọta ụzọ iji kwenye gị. Ha na-ele gị anya ruo mgbe ha ga-ahụ kpakpando malitere ịmalite na anya gị. Ha na - egbochi gị, ime ka ị na - emefu ego ị nwere n’akpa gị.
Ndị na-ere nnukwu nkume abụghị ndị na-ese gemologists
99.99% nke ndị na-ere ákwà ere abụghị ndị gemologists. Ha bụ ndị na-ere ere, ha zụrụ ịzụ nkume maka awa ole na ole ma ọ bụ ụbọchị ole na ole, kacha mma. I nweghị enyi n'ebe ahụ. Ha na-ele gị anya dịka ụzọ isi eme ego.
Zọ kachasị mma iji zụta nkume ma ọ bụ ọla bụ ịghara ige ntị n'arụmụka ndị na-ere ere, naanị ịdabere n'ihe ị maara na ihe ị hụrụ. Ndị na-ere ere agaghị akwụsị imetụ gị aka n'ụzọ mmetụta uche, ịkwaga gị. Ya mere, guzogide, gee ntị n'echiche gị nke ezi uche dị na ya.
Scams na obere ụlọ ahịa
Ka anyị bido site na wayo na obere ụlọ ahịa, ebe a na-egwupụta ihe ma ọ bụ n’ebe a na-emepụta okwute.
Ọ bụrụ na onye ire erere gị ụgwọ maka ọla ma ọ bụ nkume, ma nye gị ozugbo iji belata ego na ọkara, ị ga-agbapụ mma.
Jụọ onwe gị: ọ bụrụ na ị gaa ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ịzụta ụlọ, anụ ọkụkọ ma ọ bụ tube nke na-ezuru eze, a ga-enye gị nkwụnye ego 50 n'enweghị nkwalite nkwado? Azịza ya bụ ee e. Ọ bụghị ihe ezi uche, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na nkume ahụ bụ eziokwu ma ọ bụ ụgha, a ga-adọpụ gị.
Ndị na-agba ọla
Ndị na-enyocha nkume, na-ekpo ọkụ nkume, na-ete nkume na ibe ya, wdg.
Ihe niile na-enweghị uche. Nke a bụ na ihe mejupụtara ya na nkume nke sịntetik bụ otu ihe dị ka nkume okike. Ọ ga-eme kpọmkwem dịka ezigbo nkume maka ule niile ha ga-enweta.
Jiri otu ihe atụ tụnyere otu ihe atụ
Iji duhie gị, ndị na-ere ahịa jiri okwute sịntetik tụnyere otu iko. ka anyị kwuo maka atụ nke Ruby. Ruby bụ nkume na-acha uhie uhie site na ezinụlọ corundum. Ngwakọta chemical bụ tumadi aluminom oxide. Ruby sịntetik a na-ejikwa otu ihe ahụ mejupụtara otu ezigbo ya. Ha ga-eme otu ụdị ule ahụ niile a ga-egosi gị. Ndị na-ere ahịa ga-atụle nkume 2: ruby ​​synthetic na mpempe uhie. N'ịkọwa na ha bụ okwute abụọ dị iche, iko ahụ bụ nkume adịgboroja na ruby ​​sịntetik bụ ezigbo nkume. Ma ọ bụ ụgha. Nkume abụọ ahụ adịgboroja na enweghị uru, ha abaghịkwa.
Na-emepụta ihe na ụlọ ahịa ndị mara mma
Ugbu a, ihe atụ nke ụlọ ahịa magburu onwe ya, ebe dị elu nke ọma, ụlọ ahịa ahịa ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu.
Ndị na-ere ere agaghị anwa ime ka i kwenye na nkume dị n'eziokwu site na nyocha nkume ma ọ bụ ego ego. Usoro eji mee ihe a dị nnọọ nhịahụ: ọdịdị na ụdị asụsụ.
Ònye ga-eche na ụlọ ahịa na ụdị ọdịdị dị otú a, juputara na ndị na-ere ahịa nke ọma na ndị gụrụ akwụkwọ, na-ere ere ahịa adịgboroja n'ezie?
Ihe nke asụsụ
Mee ule ụfọdụ site n'ịjụ ajụjụ. Ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma na azịza gị, ị ga-aghọta okwu ndị ahụ na-eburu n'isi. Dịka nzaghachi nke ndị na-agba ọsọ, ma ọ bụ na-akpọ ndị na-elekọta ụlọ.
Ajụjụ 1: Ị na-ere nkume nkịtị?
Azịza: Madam, Nke a bụ ezigbo crystal.
Okwu “kristal” na gemology na-ezo aka na uzo uzo. Nke a apụtaghị na nkume bụ ihe okike ma ọ bụ ihe arụ.
Ajụjụ 2: Ọ bụ ọla ọlaọcha?
Azịza: Madam, ọ bụ ọla dị oke ọnụ ahịa.
Ọ sịghịkwa "ee" ma "mba". Ọ zaghị ajụjụ gị.
Okwu ahụ bụ "ọla dị oké ọnụ ahịa" enweghịkwa ihe iwu pụtara. N’ezie, ụlọ ahịa a na-ere ọla ndị e ji ọla allo mee nke na-enweghị ọlaọcha, ọla edo, ma ọ bụ ọla ọ bụla bara uru.
Dika ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ụzọ ọrụ ebube ị ga-esi zere ịbụ onye a ga-agbacha. Ezi uche gị bụ nchebe kachasị mma.